Eebbe maaha sida ay ku warrameen! – Kaasho Maanka
Daxaa jirta aayaad Qur’aanka kariimka ah ka mid ah oo af cad ku sheegtay in Eebbe wax metaalkiisa ah ama shabbahaa aysan jirin, isla markaas aayado kale ayaa sheegay in uu Eebbe caroodo, xaddiisyana waxa ay sheegeen in uu Eebbe masayro ama hinaaso. Sida aynu og nahay aayadaha iyo axaaddiista la ma rumeeyo, lagu mana dhaqmo ee waxaa la aamminaa oo lagu camalfalaa fasiraaddooda oo ah sida ay u fasiraan wadaaddadu, waana meesha ay dad mufakariin ahi ka sheegeen in aysan sideedaba diini jirin ee ay jirto aragti diimeed, waayo in uu qofka shacabka ahi aayad ama xaddiis sida uu u arko u qaato u ma bannaana ee waa in uu sida ay wadaaddadu u fasiraan iyo aragtida wadaaddada qaataa.
Marka la eego sida uu falsafad ahaan Eebbe u fakaro waxa uu tillaabo tillaabo u metelaa dadka, waxaana la yaab leh in wadaaddada diinta fasiraa aysan inta Eebbe ku saabsan keli ah ku sheegin wax aan la fahmi karin ee dhammaan diinta jawaabta ugu danbaysa ay ka dhigaan in aan la fahmayn. Tusaale ahaan shareecada waxaa fasirradeeda ka mid ah in qof nool gacan ama lug laga gooyo, waxa ayna wadaaddadu meelaha noocaas ah sheegaan in ay tahay murti rabbaani ah oo aan caqli lagu fahmi karin, la mana oggola in uu qof ka fakaro sida ay murti u tahay in qof nool jirkiisa la googooyo. Waxyaalo aad u badan oo shareecada ah lama macneeyo sababta iyo murtida ku jirta ee waxaa hadalka lagu dhammeeyaa in aysan dadku fahmi karin, waxaana la moodaa in duuduub ahaan loo socdo in la sheego in aysan dadku Qur’aanka iyo xaddiiska fahmi karin. Meelo badan oo shareecada ka mid ah haddii ay labo nas iskhilaafaan waxa ay wadaaddadu qaataan midka sharta badan, midka fiicanna waa ay iska tuuraan, oo arrintaas waxa ay ku macneeyaan in uu Eebbe shartaas murti uga jeedo. Tusaale ahaan xaddiis baa sheegay in markii wax la dilayo iyo markii wax la biraynayo ama gawracayo si hagaagsan loo sameeyo, xaddiis kalena waxa uu sheegay in dad dhagax la la dhaco ilaa ay naftu ka baxayso, waxa ayna wadaaddadu qaateen xaddiiska sharta ah ee sheegay in dhagax lagu garaaco dad nool, midka in dilka la hagaajiyo ahna waa ay fogeeyeen. Waxaa la moodaa in shareecada oo asalkeedii ka soo baxday dhul oommane ah oo ay naxariistu ku yar tahay haddana ay fasirrada wadaaddadu uga sii dareen ilaa ay noqotay cadowga insaaniyadda.
QORMO LA XIRIIRTA: Ri'da dambiyada
Wadaaddada islaamku waxyaalaha aysan fahmin waxaa ka mid ah qofku in uu camalkiisa xukumo ee uusan caqiidadiisa xukumin. Qofku waa uu tukan karaa oo awooddaas waa uu leeyahay, laakiin isaga oo aan Eebbe jiritaankiisa rumaysnayn ma uu samayn karo in uu rumeeyo, isaga oo rumaysanna ma uu samayn karo in uu beeniyo. Caqiidadu waa wax qofka isaga dhasha ee ma aha wax uu qofku kasbado, taasna diinta...
Marada ama jawaanka dumarku dhex galaan ee loo yaqaan Xijaabka maxay tahay ujeedka loo xidho? Yey diinta islaamku ku waajibisey? Ma diin baa mise waa dhaqan carbeed? Dhaqanka carbeed iyo diintu maxay kala yihiin? Waydiimahan iyo qaar badan oo kale si aan uga jawaabno waa inaan dul istaagno aayadaha iyo axaadiista ka hadlaya jawaankaas haweenka lagu duubay iyo ujeedka laga lahaa.
W/Q: Shaafici Xasan Maxamed 11th November 2018